तामझाम सहित प्रतिनिधिसभा–प्रदेशसभा निर्वाचन : मनोनयन दर्ता सुरु, कहाँ के भयो ? – HamroSamrachana
तामझाम सहित प्रतिनिधिसभा–प्रदेशसभा निर्वाचन : मनोनयन दर्ता सुरु, कहाँ के भयो ?
हाम्रो संरचना आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ 375 Views
५ कात्तिक,नेपालगञ्ज/प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन सुरु भएको छ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि पहिलो चरणमा चुनाव हुने ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ताको काम सुरु भएको छ ।
कालीकोटमा पनि बाम गठवन्धनको तामाझाम
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आइतबार मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको थियो। सोही अनुरुप कालिकोटमा राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन अनुसार मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। वाम गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुर्गबहादुर रावतले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका भुपेन्द्रजंग शाहीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलका महामन्त्री हुन्। प्रदेशसभाका लागि वाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चा गरीएका माओवादी नेता एवं विनाविभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
त्यस्तै ‘क’बाट नेकपा एमालेका कुर्मराज शाहीले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। प्रदेशसभाका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट कांग्रेसका निर्वाचन क्षेत्र ‘क’बाट टेकराज शाही र निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’बाट कालीबहादुर सहकारीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। मनोनयन दर्ता गर्नुपूर्व दुबै गठबन्धनले र्‍याली निकालेका थिए। जनता र कार्यकर्ताको ठूलो सहभागितासहित उनीहरुले मनोनयन दर्ता गरेका छन्।
/मुगु– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उम्मेदवारी मनोनयको क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच दोहोरो झडप हुँदा केही कार्यकर्ता घाइते भएका छन् ।
आज भाइटीकाको उत्तम साइत ११:५१ बजे,किन लगाइन्छ टिका ?